Home रोजगार सिंगापुरले माग्यो नेपाली कामदार ! हेर्नुस कति छ लागत ? कति हुन्छ तलब
May 31, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, Leaveacomment
सिंगापुरले ६ वर्षपछि फेरि नेपाली कामदारको माग गरेको छ । संस्थागत रुपमा सिंगापुरले सन् २०१३ को अगस्टपछि रोजगारीका लागि नेपाली कामदार लगेको थिएन । त्यसबेला एलन इन्टरनेशनल म्यानपावर मार्फत ९ जना नेपाली कामदार रोजगारीका लागि सिंगापुर पुगेका थिए । ति कामदारहरु सिंगापुरको युनिभर्सल मारिटाइम सोलुशन कम्पनीका लागि काम गर्न गएका थिए । यस पटक फेरि २ सय जना कामदारका लागि माग आएको छ।
त्यसयता धेरै जना नेपाली कामदारहरु व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि सिंगापुर पुगे पनि संस्थागत रुपमा भने बन्द जस्तै भएको थियो । नेपाली कामदारका लागि सिंगापुर आकर्षक गन्तव्य मानिए पनि कामदारको माग नआउदा त्यसको फाइदा नेपालि कामदारले पाउन सकेको थिएन। धेरै बर्ष पछि यस पटक धेरै नै कामदारको माग आएको हो। हाउसकिपिंगका लागि २ सय नेपाली कामदारको लागि माग आएको हो। सिंगापुर जाने श्रमिकसँग अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
सिंगापुरबाट नेपाली कामदारको माग आएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सेवा शुःल्क निर्धारण गर्न श्रम मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । श्रम मन्त्रालयले बढीमा ५० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको हो । पहिलो चरणमा रोजगार बिभागले १ सय कामदारका लागि स्वीकृति दिएको छ। सिंगापुरको यस कोटामा जाने कामदारले २ हजार ३ सय सिंगापुर डलर ( एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ) तलब पाउने म्यानपावर कम्पनी जनाएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले कन्टिनेन्टल ह्युमन रिसोर्स प्रालिलाई एक सय जनाको पूर्वस्वीकृति दिएको छ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदारको माग गर्दै विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ। बिज्ञापन पछि कामदार छनौट गरेर, भिसा लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दै अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।
कोरिया जान अब नया नियम ! कामको अनुभब हुनैपर्ने , भाषा परीक्षाले मात्र नहुने
नेपाल बैंकमा खुल्यो रोजगारी, अनलाइनबाट यसरि दिनुस आबेदन ( हेर्नुस बिस्तृतमा )
कस्तो छ तपाइको पासवर्ड ? ध्यान दिनुस यस्तो नराख्नुस – ह्याक होला है
May 26, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर ,2Comments